चलचित्रको नाम भने अहिले घोषणा गर्दिनँ: नवल खड्का - Internet Khabar
चलचित्रको नाम भने अहिले घोषणा गर्दिनँ: नवल खड्का
May 25, 2016 December 7, 2016 Internet Khabar
खड्का पछिल्लो समयमा अभिनयको साथमा चलचित्र निर्माणमा पनि सक्रिय छन् । माया बसेछ, आवाज, दशगजा र भीमदतजस्ता हिट फिल्महरू नेपाली दर्शकमाझ ल्याइसकेका खडकाले समाज सेवाको साथसाथै ‘सेलिब्रेटी हिमालयन ग्रीन टी’ नामक कम्पनी स्थापना गरी चिया, कफी, अकबरे खोर्सानी, छुर्पी लगायतका अर्गानिक दैनिक उपभोग्य सामानहरूको व्यापार पनि सुरु गरेका छन् । खड्कासँग गरेको कुराकानी ।
१.हिजोआज तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?
# केही समय अगाडिदेखि विषेश हाम्रो टिमले नेपालको स्वदेशी उत्पादन अर्गानिक, हाइजेनिक सामानहरू नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई स्वस्थ्यकर खाना उपलब्ध गराउने र नेपाली उत्पादनलाई विश्व सामु पुर्याउने उद्देश्यले एउटा अभियानको रूपमा हामीले सेलिब्रेटी ट्रेडमार्क लिएर त्यस्को उत्पादनको साथै बिक्री वितरणमा लागेका छौ । अहिले हामीसँग अर्गानिक ग्रीन टि, अर्गानिक कफि, अकबरे खुर्सानी, छुर्पीजस्ता स्वदेशी अर्गानिक हाइजेनिक सामानहरू उत्पादन प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरको लागि
२.सेलिब्रेटी ग्रीन भनेको कसरी स्पस्ट पार्नु हुन्छ ?
# सेलिब्रेटी ग्रीन टि भनेको एउटा ट्रेड मार्क हो अथवा नाम हो । तर सेलिब्रेटी भन्नाले कुनै पनि स्टार कलाकार भन्ने सर्वसाधारणको सोचाइ हुन सक्छ तर त्यो हैन ।सेलिब्रेटी भन्नाले सेल हुने सबै चिज सेलिब्रेटी हो ।
३.आफ्नो उत्पादनलाई अर्गानिक नै हो भनेर उपभोक्तालाई कसरी विस्वास दिनु हुन्छ ?
# यसलाई हामीले गुणस्तरबाट पनि परिक्षण गराएका छौ । यस्लाइ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार नै प्रमाणिात गरी बजारमा ल्याएका छौ । यो चियाको बगान इलामको ६ हजार ९ सय फिट उचाइमा अवस्थित माङमालुम चिसापानीस्थित करिब ४२ सय रोपनी क्षेत्रफलमा करिब ९ लाख चियाका बोटहरू छन् । यो सायद नेपालकै कान्छो चिया बगान हुन सक्छ । र, यो बगानमा कुनै पनि प्रकारको रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छैन । यसमा बिल्कुलै कम्पोस्ट मल मात्र प्रयोग गरिन्छ ।
४.यसको व्यापार कस्तो छ ?
# यो एकदमै न्यून मुल्यमा स्वस्थकर र हाइजेनिक वस्तु हामीले उपलब्ध गराएका छौ । यो चिज महंगो पर्ने र विदेशमा मात्र सप्लाई हुने हुनाले अहिलेसम्म उच्च वर्गीय मान्छेहरूले मात्र प्रयोग गर्ने देखिएको छ । तर हामीले न्यून आयस्रोत भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्ने गरी हामीले मूल्य निर्धारण गरेका छौ । विदेशमा यो झण्डै १ केजिको ५० हजार नेपाली रूपैयाँ पर्ने रहेछ । तर यहाँ हामीले करिब३ हजार रूपैयाँमा उपलब्ध गराएका छौ । स्वस्थ नै धन हो भन्ने उदेश्यले अर्गानिक खाना खाइयो भने मानिसको स्वस्थमा प्रतिकूल असर असर पर्ने हुदा अर्गानिक हाइजेनिक ग्रीनटीलाई, चेतना फैलाउने अभियानको रूपमा हामीले यो अवधारणा ल्याएका हौ ।
५.यो नेपाली उत्पादनलाई बिदेशतिर पनि बिक्रीवितरण गर्नु हुन्छ कि नेपालभित्र मात्रै हो ?
# अहिले हामीले कोरिया र अमेरिकामा स्याम्पल पठाएका छौ । अस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, भारत लगायत अन्य देशहरूमा पठाउने तैयारीमा छौ । भारत बाट त ठूलो मात्रामा डिमान्डनै आएको छ ।
६.अब चलचित्र क्षेत्रलाइ माया मार्नु भएको हो ?
# चलचित्र क्षेत्रलाइ मैले माया मारेको छैन र मार्न पनि सक्दिनँ । यस अवधीभरी चलचित्र क्षेत्रकै कामहरू गरि रहेको छु । चलचित्र क्षेत्रमा रहेका जो कोहि पनि आर्थिक समृद्धिको पाटोमा टेवा पु¥याउने, आय आर्जन गर्ने र केही काम गर्न चाहदाखेरी त्यस्तो कुनै संस्था होस भनेर एउटा कल्पना गरिएको थियो र त्यही अनुरूप चलचित्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोलियो र त्यही संस्थाको लगानीमा हिमालयन ग्रीनटी कम्पनी खोलेका छौ । यसर्थ यो पनि चलचित्र क्षेत्रकै एउटा पाटो हो । म आफैले चलचित्र बनाउने कुरो चाहिँ केही समय पछाडी १÷२ वटा चलचित्र बनाउदै छु । मैले बनाउने चलचित्रको नाम भने अहिले घोषणा गर्दिनँ ।
७.कलाकार संघको अध्यक्ष हुदा तपाइले चलचित्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोल्नु भयो । यसको खास उद्देश्य व्यापार हो कि सेवा ?
# समाज सेवा चाहिँ चलचित्र कलाकार आफैले गरिरहेका छौ । त्यसबाट पनि समाज सेवा नै गर्ने हो । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चाहिँ आर्थिक पाटो हो । यो व्यावसाय गर्नको लागि र शेयर होल्डरहरूलाई कसरी नाफा खुवाउन सकिन्छ भन्ने । समाज सेवा त सवैलाइ अवगत भएकै कुरा हो ।
म लगायत मेरो टिमले बागमती सरसफाइ अभियानको सुरुवात गरेका थियौ । त्यसैको फल स्वरूप आज बागमती सफा र सुन्दर देखिएको छ ।
८.निर्माता संघमा तपाइँको असन्तुष्टि देखियो नि । खास किन हो ?
# निर्माता संघमा चाहिँ खास के छ भने, जो अहिले राजकुमार राई हुनुहुन्छ । उहाले निर्माताहरूको पक्षमा धेरै ठूलो योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने आशले चुनावमा भोट दिएर जिताएका थियौ । तर उहाँलाइ मात्र जित्नु रहेछ । जितेपछि केही काम गर्नु भएन । आज ४ बर्ष बिति सक्दा पनि संस्थालाई नवीकरण नगराउनु, भवन निर्माण कोषमा रहेको २३ लाख ८० हजार रूपैयाँ भवन निर्माण कोषले मात्र बैंकबाट झिक्न पाउने विधान हुदाहुदै उहाँ आफैले झिकेर भवन निर्माण गर्नु भएको छैन । त्यो पैसा उहाले कहाँ लग्नु भयो ? के गर्नु भयो ? त्यतिकै हिनामिना गर्नु भएको छ । ३,४ वर्ष अगाडि ८१ कम्पनिलाइ उधारो सदस्यता वितरण गररिएको भनेर उहाले नै भन्नू भएको थियो
९.तपाईं कलाकार संघको निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले बहालवाल अध्यक्षलाई के के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? अर्थात के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
# सबैभन्दा पहिला त मैले जुन कामको सुरुवात गरेको थिएँ त्यो काम पूरा गर्नु भयो भने ठूलो उपलब्धि हुने छ । उहाको अर्को मुख्य एजेन्डा नै घर बनाउछु भन्ने थियो । पहिला महासचिव हुदा पनि भवन निर्माणको लागि १० लाख दिन्छु भन्नू भएको थियो ।तर दिनु भएको थिएन । तर यो पटक पनि भवन निर्माण गरेरै छाड्छु भन्नू भएको छ ।तर आज ८ महिना बिति सक्दा पनि भवन निर्माण भएको छैन । चाडोभन्दा चाडो कलाकार संघको भवन निर्माण भएको देख्न चाहन्छु । त्यो उहाले गरेदेखि अन्य कामहरू गौण रहन्छ ।
१०.अब तत्काल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
# तत्काल यो सेलिब्रेटीको अर्गानिक कम्पनी छ । यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने विस्तार गर्ने र दोस्रो आफ्नो चलचित्र बनाउने तयारी गर्दै छु । निर्माता संघको जो नाजुक स्थिति छ त्यस्लाइ ट्र्याकमा ल्याएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिस्तार गर्ने, विधि र विधान अनुसार नेपाली चलचित्रको ।
न हिरोइन न भिलेन केवल एक सलमान खान
जुत्ता सिलाउने मोचीको हातबाट अनसन तोडे डा गोविन्द केसीले
जनताको माओवादी जनताकै घरमा अभियान ल्याउँदैछौँ – अध्यक्ष दाहाल
टीकाको दिन पोखरामा प्रहरीको निःशुल्क बस सञ्चालन हुने